AEECL - Fikarohana
Mikasika ny AEECL
Fiarovana anaty vala
Malala-tanana sy mpiara-miasa
Te ho Mpikambana
Nanomboka tamin’ny taona 1980 dia efa namatsy vola fikarohana maro samihafa ny AEECL. Anisan’izany ny lafiny “cytogénétique”, ny “taxonomie” ary “distribution” tamin’ny karazan-gidro vitsivitsy toy ny vari-bolo, ny fitsidika ary ny sifaka. Fa i Sahamalaza no nataon’ny AEECL vai-doha-draharaha momban’ny fikarohana sy ny fiarovana nanomboka tamin’ny taona 1988.
Tamin’ny taona 2004 dia naorina ny ivo toeram-pikarohana sy ivo toeram-piasana tao amin’ny alan’ny Ankarafa anatin’ny vala-java-boahari-pirenena Sahamalaza Nosy Radama. Ireo mpikaroka avy tamin’ny AEECL sy avy tamin’ny anjerimanontolo tao Antananarivo sy tao Mahajanga no niara-nisala nanao izany.
Tao anatin’ny fandaran’asan’ny AEECL no nanantanterahana fikarohana lavitr’ezaka voalohany toy ny “écologie nutritionnelle”, ny “socio-écologie” ary ny “état parasitaire” mikasika ny akomba manga maso.
Ny fikarohana izay ataonay ao Sahamalaza sy maneranan’i Madagasikara dia mikasika ny karazan-gidro atahorana ho lany taranaka ary miompana amin’ny fiantraikan’ny fiovana sy fahasimban’ny ala misy ireo karazan-gidro ireo sy ny fiainany. Izany fikarohana izany dia natao mba hamolavolana tetik’asa sy fandraharan’asa entina miaro azy ireo.
Manao fikarohana koa izahay mpikambana ao amin’ny AEECL mikasika ny karazan-gidro izay tazomina sy tehirizina anaty vala. Ny tanjona dia entina hanatsarana sy hanaraha-maso akaiky ny fahasalamana sy ny fiterahan’ireo karazan-gidro ireo.
Ireo fikarohana efa natao tao Sahamalaza nanomboka tamin’ny taona 1999:
En cours Etude des populations d’Eulemur macaco flavifrons : Développement social des petits, comportement maternel, estimation de la densité et description de l’habitat Volampeno Sylviane